Shirkadaha Maaliyadeed ee Shaqsiyadeed ee ugu sarreeya 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Shirkadaha Maaliyadeed ee Shaqsiyadeed ee ugu sarreeya 2021
Isha sawirka: machad shirkadeed
Waa maxay Shirkad Maaliyadeed oo Shakhsi ah?
Ma u baahanahay Shirkad Maaliyadeed oo Shakhsi ah?
20ka Shirkadood ee Maaliyadeed ee ugu sarreeya 2021
#1. Dib -u -noqosho
#3. Goobo Internetka Maaliyadeed
#4. Bangiga Starling
#5. Xitaa Dhaqaale
#15. Lacag Libaax
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan Shirkadaha Maaliyadeed ee Shaqsiyadeed ee ugu sarreeya 2021
Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso dhammaan siyaabaha kale ee wax ku oolka ah ee aad si wax ku ool ah u maareyn karto maaliyaddaada, gaar ahaan haddii aadan lahayn aqoonta maaliyadeed ee shaqsiyeed ee habboon si aad u shaqeyso.
Shirkado maaliyadeed oo shaqsiyeed ayaa loo diyaariyey inay hubiyaan ma aha oo kaliya in dhaqaalahaaga si habboon loo maareeyo laakiin inaad ogaato muhiimadda ay leedahay aqoonta maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Miyaad la yaabban tahay waxa ay yihiin shirkadaha maaliyadeed ee ugu sarreeya ee 2021? Waxaan iftiimiyay waxa ay yihiin shirkadahaani, meesha ay ku yaalliin, iyo xiriiriyahooda.
Waxay hubin doonaan inay kaa caawinayaan sidii aad u maareyn lahayd maaliyaddaada oo aad u arki lahayd inaad caawinaad heli karto mar kasta oo aad u baahato.
Shirkad maaliyadeed oo shaqsiyeed waa shirkad kasta oo loo aasaasay inay kaa caawiso maareynta dhaqaalahaaga, kuu oggolaato inaad amaahato lacag, iyo sidoo kale maareyso meheradahaaga. Dakhligooda waxaa lagu soo saaraa lacagta aad ku bixiso adeegyada ay kuu soo bandhigeen.
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee shirkad maaliyadeed shaqsiyeed ma aha oo kaliya maareynta lacagahaaga, laakiin sidoo kale inay deymaha kuu diyaariso.
Shirkadaha maaliyadeed ee shaqsiyeed waxay hubiyaan in geedi socod adag la soo maray ka hor inta aysan shaqaaleysiin qof kasta oo sheegta inuu aqoon u leeyahay maaliyadda shaqsiga.
Waxa kale oo ay kuu samaynayaan daymo adiga oo ka qaata Nidaamka Kaydka ee Federaalka iyo bangiyada ganacsiga ee dulsaar hooseeya oo ku amaahiya dulsaar sare.
Sidaas oo kale, dulsaarka dulsaarka ee ay qaadaan shirkadaha maaliyadeed ayaa ka sarreeya dulsaarka ay bangiyadu qaadaan. Shirkadaha maaliyadeed ee shaqsiyeed waxay fahmaan muhiimada lacagta waxayna hubiyaan in lacagtaadu ku jirto gacmo weyn.
Shirkad maaliyadeed oo gaar ah ayaa qaadi doonta mas'uuliyadda hubinta inaad haysato lacag u diyaar ah ujeeddooyin degdeg ah iyo in lacagtaada si fiican loo geliyo meel ammaan ah.
Raasamaal ayaa sidoo kale lagu siin karaa si aad u bilowdo meheraddaada riyada laakiin si loo siiyo, waxay hubin doonaan inay si sax ah u xisaabiyaan si ay u arkaan haddii aad bixin karto deymaha goor dhow.
Waxay fahansan yihiin in deymaha muddada-dheer ay khalkhal gelin karaan dhaqaalahaaga sidaas darteedna, aad bay u taxaddaraan markay arrintaan wax ka qabanayaan.
Waxaa jira dhowr sababood oo ay tahay inaad u tixgeliso inaad haysato shirkad maaliyadeed oo kuu gaar ah oo ku caawisa dhaqaalahaaga gaarka ah.
Qaar ka mid ah sababahan ayaa ah-
1. Lahaanshaha shirkad maaliyadeed oo shaqsiyeed waxay xaqiijinaysaa inaad dabooshay baahiyaha lacagta iyo amniga. Waxay kaa caawin lahaayeen inaad wax badan ka fikirto sidii aad lacag badan u samayn lahayd halkii aad ku bixin lahayd lacag ka badan tan aad kasbato.
2. Shirkad maaliyadeed oo khaas ah ayaa kaa caawin doonta inaad qiyaasto miisaaniyaddaada, kaydintaada, iyo kharashaadkaaga. Waxaa muhiim ah inaad yeelato miisaaniyad si aad u hubiso inaad u isticmaashid si ku habboon, oo ah qaab keydin ah oo lagu badbaadinayo waqtiyada degdegga ah si aadan u aadin amaahda iyo kharashaadkaagaba. Shirkad maaliyadeed oo gaar ah ayaa hubisa in lacagtaada si fiican loo isticmaalo.
3. Shirkad maaliyadeed oo gaar ah ayaa hubin doonta inaad si joogto ah u koraan hantidaada. Dad badani waxay rabaan inay hanti yeeshaan, halkii ay ka codsan lahaayeen kuwa kale, oo ah qaab barkimo maaliyadeed. Laakiin hanti dhowr ah ayaa la socota qaar ka mid ah deymaha. Shirkad maaliyadeed oo gaar ah ayaa fahamsan dhaqaalahaaga waxayna go'aamin kartaa qiimaha dhabta ah ee hanti gaar ah iyo sidoo kale ogaanshaha sida loo dejiyo ama loo tirtiro deymaha.
4. Shirkad maaliyadeed oo gaar ah ayaa hubin doonta inaad ka fogaato deymaha aan la maarayn karin. Waxay hubiyaan inaad iska ilaaliso Kharashaadka Kharashka oo aad si fiican ugu noolaato miisaaniyaddaada.
Shirkad gaar loo leeyahay
Waxaa la aasaasay 2014, Revolut waa shirkad gaar loo leeyahay oo ku taal Boqortooyada Ingiriiska oo ku siisa adeegyo aadan ka heli doonin meel kale. Iyadoo Revolut, noloshaada maaliyadeed oo dhan ayaa ku jirta farahaaga.
Waxay bixisaa akoonno ay ka mid yihiin sarrifka lacagta, kaararka deynta, kaararka dalwaddu, Apple Pay, dulsaarka dulsaarka leh “vaults”, ka ganacsiga saamiyada aan komishanka lahayn, crypto, badeecadaha, iyo adeegyada kale.
Waa shirkadda maaliyadeed ee ugu fiican si ay kaaga caawiso maareynta dhaqaalahaaga si ka wanaagsan.
ZenPayroll waa softiweer lacag -bixin casri ah oo internetka ah, oo loo dhisay ganacsiyada yaryar waxaana lagu hormariyay hadafka ah in mushahar bixinta la sameeyo mid fudud oo lagu farxo. Gusto wuxuu horumariyaa xalalka mushaharka ku saleysan shabakadda ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Waxay ka shaqeysaa goob internetka ah oo bixisa mushaharka, faa'iidooyinka, kheyraadka aadanaha, iyo adeegyada is -dhexgalka loo -shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha Mareykanka.
Marka Gusto maareyso dhaqaalahaaga, waxaad yeelan doontaa xakameyn badan oo lacagtaada ah. Waxay intabadan ku jiraan internetka si aad xitaa adeegyadooda uga hesho raaxada gurigaaga.
Circle waa shirkad lacageed oo dhijitaal ah oo la aasaasay 2013, iyada oo hadafkeedu yahay inay kaa caawiso sidii aad si fiican u maareyn lahayd maaliyaddaada shaqsiyeed. Badeecadeeda ugu weyni waxay ahayd app loo yaqaan Circle Pay kaas oo awood u siiyay xawaaladaha degdegga ah iyo kuwa lacag la'aanta ah ee u dhexeeya shaqsiyaadka.
Circle wuxuu inta badan ku weyn yahay bixinta talooyin maaliyadeed iyo hubinta inaad si caqli gal ah u maalgeliso lacagtaada. Waa mid ka mid ah shirkadaha maaliyadeed ee ugu wanaagsan.
Bangiga Starling waa bangi dhijitaal dhijitaal ah oo fadhigiisu yahay Boqortooyada Ingiriiska, kaas oo diiradda saaraya alaabada koontada hadda iyo tan ganacsiga.
Waa bangi aan u ekaan bangi maxaa yeelay waxay bixiyaan adeegyo aysan bangiyadaada dhaqameed bixin. Bangiga Starling wuxuu kaloo bixiyaa adeegyo si loo hubiyo in dhaqaalahaaga gaarka ah si wanaagsan loo maareeyo.
Waxay kaloo leeyihiin adeegyo guur -guura oo dhaafsiisan wax kasta oo aad waligaa la kulantay. Waxay ka dhigayaan maareynta dhaqaalahaaga mid aan dadaal lahayn oo awood siinaysa.
Waxaa la aasaasay 2015, Xitaa Maaliyaddu waa shirkad fintech B2B2C ah oo wax ka beddeleysa habka hay'adaha maaliyadeed ay u helaan oo ula xiriiraan macaamiisha. Hadafku waa in la beddelo sida ay hay'adaha maaliyadeed ku helaan oo kuguula xiriiraan si aysan jirin shirkad kale oo maaliyadeed iyadoo la hubinayo inaad ku raaxaysato khibradda isticmaale ee aadka u wanaagsan ee aad mudan tahay oo aad filanayso.
Waxay hubiyaan inaad ka baxdo deynta iyo inaad maalgashato oo aad u qorsheysato lacagtaada si waafaqsan.
TrueLayer waa hormuudka tikniyoolajiyadda bixisa kaabayaal maaliyadeed oo sugan oo caalami ah. Waxaad si fudud ugu maareyn kartaa dhaqaalahaaga shaqsiyeed.
Waxay si sahal ah isugu darsadeen lacag-bixinnada jiilka xiga iyo xogta maaliyadeed barnaamij kasta waxayna u dhiseen badeecooyin awood leh dhaqaalahaaga oo aad gabi ahaanba jeclaan lahayd.
TrueLayer waxay leedahay albaab loogu talagalay codsiyada la oggolaaday si loogu xiro hay'adaha maaliyadeed, sida bangigaaga waddada-dheer ee caadiga ah.
Digit waa safar ujeedadiisu tahay in la qaboojiyo isdhexgalka ka dhexeeya aadanaha iyo lacagtooda. Caadooyinka maaliyadeed ee xun waxay abuuraan dhibaato aan loo baahnayn oo naga weecisa inaan ku noolaano nolosheena si buuxda.
Adigoo leh Digit oo hagaya yoolalkaaga lacagta, waxaad ku gaari doontaa si ka dhakhso badan sidii aad xitaa filaysay. Digit wuxuu kaloo adeegsadaa barashada mashiinka iyo dhaqammada ugu wanaagsan ee maaliyadeed si loo xisaabiyo inta ay tahay inaad keydiso oo maal gasho maalin kasta, marka loo eego dakhligaaga.
Akhri: Waa Maxay Dillaal Amaah Ganacsi Yar?
Jeeves waa fintech oo keenta xalal maaliyadeed si loo xoojiyo ganacsiyada adduunka. Jeeves waxay ka dhisaysaa kaabayaasha fintech ee caalamiga ah meel xoqan; tan waxaa ka mid ah lakabka is -beddelka caalamiga ah ee waddammada oo dhan iyo awoodda lagu socodsiinayo dhammaan kharashyada shirkadda.
Waxay inta badan maamushaa dhaqaalaha shirkadaha laakiin sidoo kale waxay leedahay meel yar oo lagu maareeyo dhaqaalaha shaqsiyeed. Waxay lacag badan ka qaadaan, laakiin waxaad ku nasan kartaa inaad ku qiimayn doonto lacagtaada.
Cleo waxay bixisaa adeegyada ugu fiican maaliyaddaada shaqsiyeed. Waxay kuu xaqiijineysaa inaad keydiso sida ay tahay dhaqdhaqaaqaaga dhinacaaga iyo inaad si joogto ah u hesho waxyaabo aad ku maalgeliso lacagtaada.
Cleo, hadafku waa in si weyn loo wanaajiyo xiriirka qof walba ee lacagta. Waxa kale oo aad adeegyadan ka heli kartaa shabakadooda internetka. Chatbot -ku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la falgasho dhaqaalahaaga. Cleo ma dhaqaajin karto lacagtaada.
Way arki karaan oo waxay si joogto ah kuugu soo diri doonaan xusuusinta sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo maaliyaddaada shaqsiyeed.
SmartAsset waxay u fududaynaysaa go'aamada ugu waaweyn nolosha iyada oo keenaysa hufnaan buuxda geedi socodka go'aan qaadashada maaliyadeed.
Waxay haystaan ​​aalado ku guuleysta abaalmarinta, xisaabiyeyaasha, iyo waxa ku jira waxaa abuuray khubaro maaliyadeed shaqsiyeed waxayna u adeegaan in ka badan 45 milyan oo qof bil kasta.
Markaad dooranayso lataliye maaliyadeed, waxaad doonaysaa inaad si taxaddar leh u soo xusho. La -taliyaha saxda ahi wuxuu noqon karaa mid kaa caawiya inaad go'aansato oo aad gaarto yoolalkaaga maaliyadeed iyo u diyaargarowga hawlgabka.
Waxay abuureen hagaha lataliyaha maaliyadeed iyo ilo waxtar leh oo aad u adeegsan karto raadintaada lataliyaha ugu fiican adiga.
Maalgashigu waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo kaydkaaga muddada fog. Adigoo wata Freetrade, waxaad hubsan kartaa in tan adiga laguu fududeeyay. Waxaa jira hufnaan leh khidmaddooda iyo khidmaddooda.
Iyada oo leh Freetrade, waxaad ka dooran kartaa tiro balaadhan, oo daboolaya qaybaha kala duwan iyo suuqyada adduunka oo dhan. Waxa kale oo aad ka dooran kartaa kumanaan kayd oo ka socda London Stock Exchange, NYSE, iyo NASDAQ.
Haddii aad raadineyso maalgelin ka wanaagsan sidii aad u wanaajin lahayd dhaqaalahaaga shaqsiyeed, fiiri Freetrade.
Chime waa shirkad tiknoolajiyadeed oo maaliyadeed oo lagu aasaasay in adeegyada bangiyada aasaasiga ahi ay noqdaan kuwo waxtar leh, fudud, oo bilaash ah.
Muuqaalka Badbaadinta Markaad Ku Bixiso Chime wuxuu kuu oggolaanayaa inaad keydiso qaddar yar markaad wax iibsaneyso.
Mar kasta oo aad isticmaasho kaarkaaga debit Chime, Chime wuxuu ku wareejiyaa macaamilka ilaa doolarka kuugu dhow wuxuuna ku wareejinayaa farqiga akoonkaaga Kaydka. Haddii aad leedahay caadooyin badbaadin oo liita, Chime ayaa kuu ah sharadka ugu fiican.
La aasaasay 2014, Greenlight Financial Technology waa shirkad fintech-ku fadhida Atlanta oo ay ka go'an tahay inay awood u siiso waalidiinta inay koriyaan carruur caqli badan oo si fiican u kharash gareeya.
Greenlight waxay u dabaaldegtaa maaraynta lacagta caqliga leh iyadoo ku abaalmarineysa carruurta leh 1% Lacag Caddaan ah iyo 2% dheelitirka keydkooda. Hay'addan maaliyadeed waxay ka caawin doontaa carruurtaada inay si fiican u kaydiyaan oo u koraan aqoontooda maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Acorns waa tikniyoolajiyad maaliyadeed oo Mareykan ah iyo shirkad adeegyo maaliyadeed oo fadhigeedu yahay Irvine, California oo ku takhasustay maalgashiga yar-yar iyo maalgelinta robo.
Waa shirkaddii ugu horraysay ee dunida u fidisa maalgelin yar. Injineerka maaliyadeed ee gaarka ahi wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay soo ururiyaan isbeddelka firaaqada ah ee laga soo iibsado maalin kasta oo ay ku maalgeliyaan qaddarradaan hoose ee doolarka ah si xirfadaysan loo maareeyo tusmada.
MoneyLion waa shan sano jir ah shirkad fintech gaar loo leeyahay oo siisa macaamiisha amaahda, la-talinta maaliyadeed, iyo adeegyada maalgashiga.
Waxaa la aasaasay 2013, suuqa bartilmaameedka MoneyLion waa 70% macaamiisha Mareykanka, koox haysata kayd ka yar $ 2,000 celcelis ahaan.
MoneyLion waa hormuudka maaliyadeed mobilada oo awood u siisa macaamiisha inay gacanta ku dhigaan noloshooda maaliyadeed iyagoo adeegsanaya badeecado ka fiican amaahda, kaydinta, iyo maalgashiga.
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo ku saabsan Shirkadaha Maaliyadeed ee Shaqsiyadeed ee ugu sarreeya 2021
Shirkadaha maaliyadeed ee Shaqsiyeed ma yihiin kuwo sharci ah?
Haa. Shirkadaha guurka shaqsiyeed waa sharci. Hubi inay diiwaangashan yihiin oo la aqoonsan yahay ka hor intaanay la gelin ganacsi.
Ma ku biiri karaa shirkad maaliyadeed oo gaar ah haddii aanan lacag haysan?
Shirkadaha maaliyadeed ee shakhsiga ah ayaa inta badan la diyaariyaa si ay kaaga caawiyaan inaad si fiican u maareyso maaliyaddaada shaqsiyeed. Haddii aadan haysan wax lacag ah oo aad ku maamusho, laakiin aad u baahan tahay dammaanad oo aad u baahan tahay raasumaal, shirkad maaliyadeed oo shaqsiyeed ayaa ah qofka aad u tagto.
Ma inaan leeyahay shirkad maaliyadeed oo shaqsiyeed?
Haddii aad si fiican u maareyn karto dhaqaalahaaga oo aadan u baahnayn amaah, uma baahnid shirkad maaliyadeed oo gaar ah.
Maxay dadku ka garan waayaan shirkadaha maaliyadeed ee gaarka ah?
Shirkad maaliyadeed oo gaar ah, sicirka amaahda lacagtu aad bay uga hooseysaa tan bangiyada.
Miyaan deyn ka qaadan karaa shirkad maaliyadeed oo gaar ah?
Haa. Amaahdu waa mid ka mid ah hawlaha ugu horreeya ee shirkad maaliyadeed oo shakhsi ah.
Kuwani waa shirkadaha maaliyadeed ee ugu sarreeya sannadka 2021. In kasta oo qaarkood ay bixiyaan adeegyo sida kaa caawinta kaydinta si loo hubiyo inaad si habboon u maalgeliso lacagtaada, dhammaantood waxay ku dadaalaan inay ku siiyaan hab wanaagsan oo aad ku maamusho kuna ilaaliso dhaqaalahaaga shaqsiyeed.